Play Texas Hold'em Poker on Your Mobile iPhone, आईप्याड, BlackberryMobile Casino Plex
mFortune मोबाइल क्यासिनो तपाईं वास्तविक मुद्रा को लागि मोबाइल पोकर आनन्द उठाउन सक्छौं जहाँ केही स्थानहरू मध्ये एक छ. त्यहाँ वास्तविक पैसा टेक्सास होल्डम पोकर खेल सबै दिन र रात उपलब्ध छन्, यो तपाईं सुहाउने जब तपाईं एक खेलमा सामेल गर्न अनुमति. पक्कै, तपाईं पनि अर्डर तपाईं वास्तविक पैसा खेलाडीहरू लिन अघि आफ्नो खेल अभ्यास गर्न मजा लागि खेल्न सक्षम छन्.
यो mFortune मोबाइल क्यासिनो टेक्सास होल्डम पोकर खेल टेक्सास होल्डम पोकर लागि मानक नियम पालना र खेल परिचित छ वा जो कसरी खेल्न सिक्न चाहन्छ जो लागि आदर्श छ. खेलाडी दुई होल कार्ड सम्हाल्न छन् र सँगै पाँच समुदाय कार्ड संग तपाईं सबै भन्दा राम्रो पांच कार्ड पोकर हात उपलब्ध बनाउन आवश्यक हुनेछ.
हात दर्जा, उच्चतम देखि सबै भन्दा कम गर्न, निम्नानुसार: शाही फ्लस, सीधा फ्लस, चार प्रकारको को, पूर्ण घर, फ्लस, सीधा,3एक प्रकारको,2जोडी, 1 जोडी. एक पटक हात को सबै प्ले गरिएको छ, यदि कुनै स्तर हात अवस्थित, त्यसपछि प्रत्येक खेलाडी को उच्च कार्ड तुलना गरिएको छ.
तपाईं लिन सक्नुहुन्छ प्रत्येक कार्य को लागि एक बटन छ रूपमा खेल्ने सजिलो हुन सक्दैन - शर्त, कल, हुर्काउन, जाँच र गुना.
खेलको विजेता सम्पूर्ण पट सम्मानित गरिनेछ, जबसम्म दुई खेलाडी बाँध, जो मामला मा पट उत्तिकै खेलाडी बीच विभाजित गरिनेछ.
एक पक्ष पट कि खेल मा अवस्थित पनि छ र यो तिनीहरूले पर्याप्त चिप्स छैन रूपमा शर्त कवर सक्ने छैन खेलाडीहरू लागि उपयोगी छ. mFortune क्यासिनो लागि छेउमा पट को आकार गणना.
त्यहाँ टेबल तीन स्तरहरू त तपाईं सबै भन्दा राम्रो आफ्नो क्षमता सुहाउने तालिका मा खेल्न सक्छन् छनौट गर्ने हो. साथीहरूसँग निजी टेबल मा खेल्न विकल्प पनि छ.